Inkcazo yeeNkcazo zeeNdaba zabaFundi beeNgesi
Abafundi abaninzi banzima ukuqonda iicatshulwa zephephandaba. Oku kungenxa yokuba iintloko zephephandaba zihlala zivakalisi ezingaphelelanga (oko kukuthi amaxesha amanzima aphezulu ). Nantsi isikhokelo sezinto eziqhelekileyo ezifunyenweyo kwizihloko zephephandaba.
Iintloko zihlala ziqulethe ibinzana elingenanto isenzi. Ibinzana lesibizo lichaza isabizo (oko kukuthi abantu abangaqhelekanga, abantu abangaqhelekanga ). Nazi ezinye izibonelo zegama lesihloko esithi:
Ngaphantsi kwengcinezelo evela kwi-Boss
Ukuphendula ngokunyanisekileyo kwabavoti
Ku luncedo ukuzibuza imibuzo efana nale: Kuphi na ?, Ngayiphi na ?, Ubani ?, Ngubani? njl. xa ufunda olu hlobo lweentloko. Xa uzibuza le mibuzo, ungaqala ukulungiselela ngokwesiqendu. Lo mkhuba unceda ubuchopho buzilungiselele ngokuqala ukucinga ngesigama esihambelana nesihloko. Nasi umzekelo:
Imibuzo endinokuzibuza yona yile: Ngubani? Kutheni ukutyelelwa kungalindelekanga? Ngubani o tyelelwe? njl njl. le mibuzo iya kunceda ugxininise ingqondo yam kwisigama esihlobene nolwalamano, ukuhamba, ukuxhamla, izizathu ezibalulekileyo zokutyelela, njl njl.
Olunye uhlobo oluqhelekileyo oluqhelekileyo luhlobo lomtya weethathu, ezine okanye ezinezibizo kunye kunye (oko kukuthi i- Time Leader Question Question ). Oku kunokuba nzima kuba amagama awabonakali ahambelana namazwi okanye izichazi. Nayi eminye imizekelo:
Ikomiti yePensenti yePensenti
Imiqathango yokuphazamiseka kweNkampani
Isikhalazo somThengi soMthengi
Kwimeko yesimbolo segama, kunceda ukuzama ukudibanisa iingcamango ngokufunda emva. Umzekelo:
Ngokufunda emva, ndiyakucinga ukuba: Kukho isikhalazo esenziwe ngumthengi malunga nenkqubo yokudlulisela imoto ye- Mustang .
Ngokuqinisekileyo, kufuneka usebenzise umzekelo wakho!
Iinguqu ezahlukeneyo zenguqu
Kukho inani lezenzi utshintsho olwenziwe kwiihloko. Eziqhelekileyo zezi:
Amaxesha athile asetyenziswayo endaweni yeendlela eziqhubekayo okanye ezigqibeleleyo. Umzekelo:
Ukhohliwe Mzalwana = Ukhohliwe umzalwana (emva kwexesha elide).
AbaProfesa Abaqhankqalazi Bakhokhela Amaphulo = Abaprofeti baqhankqalaza ukuhlawula ukuhlawula (eyunivesiti).
Ifom engapheliyo ibhekisela kwikamva. Umzekelo:
UMeya wokuvula i-Shopping Mall = I-dolophu iya kuvula ivenkile entsha yezitolo.
UJames Wood Ukutyelela iPortland = (Umdlali owaziwayo) uJames Wood uya kutyelela ePortland kungekudala.
Izenzi ezixhasayo zidibaniswa kwifom ehambayo. Umzekelo:
Indoda ibulewe kwengozi = Indoda ibulawe ngengozi.
Tommy Inja ebizwa ngokuba yiHero = uTommy inja ibizwe ligama (ngu-dolophu).
Mhlawumbi uye waphawula kwimimiselo engentla apha ukuba amabini amanqaku acacileyo kwaye angapheliyo aphonswe kumaphephandaba eendaba (oko kukuthi iMeya yokukhetha Umviwa ). Nayi eminye imizekelo:
UMongameli uxela isigubho = UMongameli uvakalise ukubhiyozela.
Umphambukeli ubona umfazi wesifazana = Umdluli uye wabona umfazi eqa (emfuleni).
IsiNgesi ngeenjongo zezoNyango - iziganeko eziphazamisayo
Imbali ye-PC ye-IBM
"Ilayiti"; "Ukutya"; "Ukutya" ngesiTshayina
Indlela yokucoca i-Filter yakho ye-Cartridge Filter